के हो क्युआर कोड ? यसरी बनाउनुहोस् सजिलै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
के हो क्युआर कोड ? यसरी बनाउनुहोस् सजिलै
प्रकाशित मिति १९ असार २०७६, बिहीबार ०९:३० लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । अधिकांश कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादनको बक्स अर्थात बाहिरी खोलमा क्युआर कोड दिएका हुन्छन् । हेर्दा प्रष्ट बुझ्न नसकिने सानो कोडमा थुप्रै जानकारी लुकेको हुन्छ । यही कोडको सहयोगले एप डाउनलोड गर्ने लिंक पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका साथै डिजिटल पेमेन्टका लागि पनि क्युआर कोडको प्रयोग गरिन थालिएको छ ।
यसका लागि प्रयोगकर्ताले यो कोडलाई आफ्नो स्मार्टफोनमार्फत स्क्यान गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै किसिमले थुप्रै मानिसहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणका लागि पनि विकार्डको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जुन विवरण पढ्नका लागि एक क्युआर कोड हुन्छ । यसबाट नाम, नम्बरका साथै उपनाम, ईमेल, कम्पनीको विवरण, फोटो, फ्याक्सका साथै अन्य थुप्रै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यति धेरै जानकारी दिने यस किसिमको कोड बनाउन भने त्यति धेरै कठिन छैन । तपाईंले सहज तरिकाबाट पनि क्युआर कोड बनाउन सक्नु हुनेछ । यसका लागि कयौँ अनलाइन वेबसाइट पनि उपलब्ध छ । प्रयोगकर्ताले गुगलमा गएरमा ‘क्युआर कोड जेनेरेट’ टाइप गरी सर्च गरेमा क्युआर कोड बनाउने कयौँ वेबसाइटहरुको लिंक प्राप्त हुनेछ ।
तपाईंले सिधैँ द-क्युआरकोड-जेनेरेटर डट कम मा गएर पनि क्युआर कोड बनाउन सक्नु हुनेछ । वेबसाइटमा विकार्डको विकल्प पनि रहेको हुन्छ । त्यसमा गएर तपाईंले सबै विवरण पूर्ण रुपमा भर्नु पर्छ । त्यसपछि क्युआर कोड जेनेरेटमा गएर क्लिक गर्नुहोस् । तपाईंले भर्नु भएको विवरण क्युआर कोडको इमेज बनेर आउनेछ । यसलाई डाउनलोड गरेर स्क्यान गर्नु भयो भने तपाईंले दिनु भएको सबै विवरण देखाउने छ । यदि तपाईंको स्मार्टफोनमा क्युआर कोडलाई स्क्यान गर्ने विकल्प छैन भने गुगल प्ले स्टोरमा गई क्युआर कोड स्क्यानर एन इन्स्टल गर्न सक्नु हुनेछ ।
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो सबै विवरण क्युआर कोडमा सुरक्षित (सेभ) गर्न सक्ने छन् । जसलाई आवश्यकताअनुसार अन्य प्रयोग कर्तालाई पठाउन पनि सक्नेछन् । तपाईंले आफ्नो विवरण पटक-पटक टाइप गरिरहनु पर्ने हुन्छ भने यो नै तपाईंका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हुनेछ ।
कम्पनीको उत्पादनबारे जानकारी दिने क्युआर कोड कालो र सेतो रङ्गको छिर्केमिर्के चार कोठे आकृति हुन्छ । यसभित्र थुप्रै जानकारी राख्न सकिन्छ ।
पराजयपछि पौडेल र कोइरालाकाे देउवासँग वार्गेनिङ, लज्जाजनक हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस भित्रको कलह झन बढ्दै !
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा लज्जाजनक हार बेहोरेको नेपाली कांग्रेस भित्रको कलह झन बढ्दो छ । पराजयको कारण खोज्न…
को बन्छ अबको प्रहरी प्रमुख? नाै महिनामै एसएसपीबाट आइजी- किन यस्तो भद्रगोल !
काठमाडौं। गत असार अन्तिम सातासम्म प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) रहेका प्रहरी अधिकारीमध्येबाट अबको केही साताभित्र देशले नयाँ महानिरीक्षक (आईजी)…
महिलाले यसरी गर्दछन् हस्तमैथुन
महिलाको सन्दर्भमा योनिलाई नै प्रमुख यौनअङ्ग मानिन्छ । यद्यपि महिलाका अन्य विभिन्न अङ्ग पनि यौनका दृष्टिकोणले सम्बेदनशील हुन्छन् ।…
ललितपुरले जित्यो ईपीएल क्रिकेटको उपाधि
काठमाडौं । ललितपुर प्याट्रिएटसले एभरेष्ट पि्रमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा शनिबार भएको…
बि.स.२०७४ फाल्गुन २० गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०१८ मार्च…